Dad Hor Leh Oo Lagu Dilay Duqeyman Ka Dhacay Guudhada Bari. – Bogga Calamada.com
Dad Hor Leh Oo Lagu Dilay Duqeyman Ka Dhacay Guudhada Bari.
Ugu yaraan 42 ruux oo horleh ayaa saacadihii ugu dambeeyey lagu dilay duqeymo xoogan oo ka dhacay deegaanada Guudhada bari xilli ciidamada xukuumada ay sii wadaan weerarka cirka iyo kuwa dhulka ah ee ay ku hayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ee gobolka.
Kooxaha firfircoon ee ku sugan magaalada Dooma oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka ayaa soo sheegaya in duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha Nidaamka aysan kala joogsi lahayn, si isku mid ahna u beegsanayaan dhamaan deegaaada Guudhada bari.
TV-ga rasmiga ah ee Nidaamka Al-Asad ayaa sheegay in ciidankoodu ay qabsadeen magaalada Mudeyra maalintii shaley, iyagoona sheegay in hadda cidamadu ay go’doomiyeen magaalada Dooma oo ay doonayaan in ay gudaha u galaan.
“Ciidamada dowlada ayaa hadda isku hareereeyey magaalada Dooma ka dib markii ay qabsadeen magaalada ku dhow ee Mesraba oo qiyaastii 10km u jirta bariga magaalada Dimishiq” ayaa lagu yiri war laga sii daayey TV-ga nidaamka.
Hormaradii ugu dambeeyey ee ay sameeyeen ciidamada Al-Asad waxay go’doon adag gelisay magaalooyinka Doma iyo Harasta sida ay sheegayaan warbaahinada, waxaana deegaanadaas ka socda duqeymo ba’an oo lagu argagax gelinayo dad rayadka ah ee ku go’doonsan deegaanadaasi.
Qiimeyntii ugu dambeysay waxaa lagu sheegay in Guudhada bari ay hadda ku go’doonsan yihiin ugu yaraan 400,000 oo dad ah kuwaas oo aanan heysan cunto iyo gargaar caafimaad.
Naashid lagu magacaabo Nuur Aadam ayaa warbaahinta u sheegay in ugu yaraan 8 ruux lagu dilay mandiqadda lagu magacaabo Jobar oo ah magaallo dhanka bari kaga beegan Dimishiq, halka sidoo kalena 16 ruux oo kale oo ka soo jeeda hal qoys lagu dilay duqeyn ka dhacday magaalada Dooma.
Tirada kale ee dadka lagu dilay duqeymihii ugu dambeeyey waxaa la sheegay in lagu dilay duqeymo ka dhacay deegaanada Harasta, Zamalka, iyo Arbin sida uu sheegay Nuur Aadam.
Hay’adaha isha ku haya dagaalada Suuriya ayaa tilmaamay in ciidamada Nidaamka ay gobolka u kala qeybiyeen saddex qeybood, qeybwalibana si gaar ah loo go’doomiyey, iyagoo tilmaamay in gobolka look ala jaray, Dooma iyo hareeraheeda oo dhinac ah, Harasta oo dhacda galbeedka, iyo deegaanada kale ee dhaca koonfurta, waxaana mid waliba oo ka mid ah saddexdaas qeybood saaran go’doon xoogan.
21-kii cisho ee ugu dambeeyey waxaa duullaanka ballaaran ee ciidamada Nidamka ay ku qaadeen Guudhada bari lagu dilay ugu yaraan 1,099 ruux oo shacab ah oo ay ku jiraan 227 caruur ah iyo 145 dumar ah, halka sidoo kalena lagu dhaawacay ugu yaraan 4,378 ruux.
Kooxaha difaaca madaniga ee mutadawiciinta ah waxay sheegayaan in mid ka mid ah weerarada lagu qaaday mandiqada Arbin ee Guudha uu ka mid ahaa mid loo adeegsaday maadada Foosfoorka loo yaqaano taas oo ka dhigan weerarkii labaad oo loo adeegsado hubka kiimikada oo uu adeegsado nidaamka maalma gudahooda.
Nidaamka Al-Asad ayaa inkiray eedeymahaas, wuxuu ku tilmaamay been abuur ay kooxaha mucaaradku ku doonayaan in ay ku qalqalgeliyaan howlgalka ay ka wadaan halkaasi.